Kuhle China Supplier Moringa Amafutha ebalulekile uwoyela ifektri abakhiqizi | HaiRui
Isinaphi esibuhlungu. Okucasulayo
I-liguid ephuzi elikhanyayo
Amandla adonsela phansi athile @ 25 ° C:
I-Moringa Seed Oil ingamafutha alula asakazeka angene kalula esikhunjeni. Amavithamini A, B, C, E, ama-fatty acids angenasuturated nama-palmitoleic, oleic kanye ne-linoleic acid ahlinzeka ngezimfanelo zawo zokuthambisa nezondlayo. IMoringa Seed Oil iqukethe ama-antioxidants ayi-1,700 futhi ochwepheshe bababheka njengenye "yamafutha ezimonyo amakhulu kunawo wonke ake atholwa". Ngenxa yokuphakama kwayo
Ukuhlungwa kwezakhi ezibulala amagciwane nezokulwa nokuvuvukala, iMoringa Seed Oil isiza ukunciphisa ukubonakala kwemigqa emihle nemibimbi futhi isetshenziselwa ukuhlanza nokwelapha isikhumba.Umafutha wesiphathi seMoringa aziswa kakhulu ezimbonini zezimonyo. Kubhekwa njengokuhle kakhulu ekusetshenzisweni kwe-massage ne-aromatherapy. Uwoyela uthola ukusetshenziswa emikhiqizweni ehlukahlukene kubandakanya ukhilimu omelana nokuguga, imikhiqizo yokunakekelwa kwezinwele, insipho nokuwasha umzimba, ukhilimu wobuso, amakha nephunga.
Amafutha wembewu kaMoringa asiza ukuvuselela ubuso nobuso besikhumba
Hlanza uketshezi oluphuzi
Ibanga lezokwelapha lezimonyo, ezokwelapha, ukudla
Iphunga elikhethekile le-moringa
Massage, izimonyo zokunakekelwa kwesikhumba, i-diffuser, Medicine
uwoyela lwesinaphi ulungele i-pepole ejwayelekile, iziguli ezine-hyperlipidemia, umfutho wegazi ophakeme, iziguli ezinesifo senhliziyo, ukulahleka kwesifiso kufanelekile ukusetshenziswa.
1. Inomphumela we-appetizer, ingakhulisa ukuthanda ukudla
2. Kukhona umsebenzi oqinile wokukhipha ubuthi emzimbeni. Ngakho-ke isalmon eluhlaza kanye nokunye ukudla kwasolwandle kuvame ukufakwa isinaphi
3. Ukuvimbela ukubola kwamazinyo, umdlavuza, amahlule egazi. Unomphumela othile wokwelashwa kwesifuba somoya
Ukuvimbela i-cholesterol ephezulu, umfutho wegazi ophakeme, isifo senhliziyo, ukunciphisa i-viscosity yegazi
5. emzimbeni, uwoyela lwesinaphi uwoyela omuhle wokubhucungwa
Moringa Amafutha Esikhumba
IVirgin Moringa Amafutha
U-100% uketshezi lwamafutha emvelo
10ml 50ml 500ml 25kg uwoyela we-castor ocindezelwe
Isisindo Ukwehla Massage Amafutha iLavender Amafutha Abalulekile ...